Gonadotropin maka Ọgwụ (GnRH) - China Ningbo Second Ókè mmiri ọgwụ
Shuniu GnRH (adabara Mmiri ara ehi ehi) Gonaderelin maka ọgwụ The mba klas nke anọ nke ọhụrụ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ọgwụ [Description] Ngwaahịa a bụ na-acha ọcha ma ọ bụ gbanyụọ-ọcha akpụkọta-ihicha akpụ ma ọ bụ ntụ ntụ. [Function na Jiri] Ngwaahịa a nwere ike ime ka anụ si prepituitary gland nyak follicle-akpali akpali hormone (FSH) na luteotropin hormone (LH). Ọ nwere a curative mmetụta dị iche iche nke ovary ọrịa, karịsịa maka follicular cysts. Ọ na-nwere mmetụta na mgbe ndị na-alụso ọrịa ọgụ na ...
Shuniu GnRH (adabara Mmiri ara ehi ehi)
Gonaderelin maka ọgwụ
T ọ national fourth class of new veterinary drug
Ngwaahịa a bụ na-acha ọcha ma ọ bụ gbanyụọ-ọcha akpụkọta-ihicha akpụ ma ọ bụ ntụ ntụ.
[Function na Jiri]
Ngwaahịa a nwere ike ime ka anụ si prepituitary gland nyak follicle-akpali akpali hormone (FSH) na luteotropin hormone (LH). Ọ nwere a curative mmetụta dị iche iche nke ovary ọrịa, karịsịa maka follicular cysts. Ọ na-nwere mmetụta na mgbe ndị na-alụso ọrịa ọgụ na chorionic gonadotrophin (HCG) ma ọ bụ LH. Ọ nwere ike isi gwọọ onye ovulation odida nke follicle (egbu oge ovulation); ọ ga-ngalaba-eji na wuru njikọta, na ike ịrịba dịkwuo tụụrụ ime ọnụego na estrous ehi. Ke adianade do, ọ na-abụkarị na-eji maka n'oge ọtọ mweghachi nke ovary mgbe nnyefe clinically (n'ime ụbọchị 40 mgbe nnyefe); ọ nwere ike na-eji timed estrus, timed wuru insemination ka ebelata nnyefe nkeji ka kpamkpam melite Bovine ọmụmụ.
1.Curing na follicular cysts: ọ na-atụ aro ka intramuscularly igba Shuniu GnRH maka 200 mcg maka mmezi oké egwu follicular cysts; ọ na-atụ aro ka intramuscularly igba Shuniu GnRH maka 100 mcg maka mmezi nwayọọ follicular cysts.
2.It na-atụ aro ka intramuscularly igba Shuniu GnRH maka 100 mcg maka mmezi nke ovulation ọdịda.
3.It na-atụ aro ka intramuscularly igba Shuniu GnRH maka 100 mcg maka mmezi nke ovarian quiescence.
4. Ọ na-atụ aro ka intramuscularly igba Shuniu GnRH maka 100 mcg maka ịkwalite ndị ovulation.
5. Ọ nwere ike ngalaba-eji na Cloprostenol sodium injection (Ntuziaka Nne na Nna) maka timed wuru insemination maka mmiri ara ehi ehi (maka kpọmkwem ojiji na onunu ogwu, biko hụ 19 nke page a ntuziaka, Shuniu GnRH (adabara Mmiri ara ehi ehi) )
A machibidoro iwu ga-eji ibu nkwalite.
100mcg × 10 karama
Echekwara na ihe airtight ọnọdụ na ndo (n'okpuru 20 ℃).
Anụ maka ụbọchị 7, Mmiri ara ehi maka 12 awa.
Previous: Estradiol Benzoate Ọgwụ (Estrogen)
Osote: LHRH-A2 maka Ọgwụ Bovines & ézì
Gonadotropin N'ihi Ọgwụ (Gnrh)
Ime Mare ọbara Gonadotropin
Dexamethasone sodium phosphate Ọgwụ
LHRH-A2 maka Ọgwụ Bovines & ézì